थाहा पाउनुस्, बुहारीले बुधवार किन घर जानु हुँदैन ? - Taja Report
Homeसमाचारथाहा पाउनुस्, बुहारीले बुधवार किन घर जानु हुँदैन ?
July 31, 2018 समाचार Comments Off on थाहा पाउनुस्, बुहारीले बुधवार किन घर जानु हुँदैन ?
काठमाडौं । शास्त्रहरूमा हप्ताको हरेक दिन कुनै विशेष कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। यसमा दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराका अलावा यात्राका लागि निषेधित वार पनि छ।
यहाँ हामी बुधवारसँग जोडिएको त्यो मान्यताका विषयमा चर्चा गर्नेछौं जसअनुसार छोरीहरूलाई बुधवार ससुराल पठाउन हुँदैन।
एकचोटि मधुसूदनले बुधवारका दिन पत्नीका आमाबुवासँग संगीतालाई बिदा गर्न लगायो । उसका सासू ससुराले त्यो दिन छोरी बिदा गर्न चाहेनन् र ज्वाईंलाई सम्झाउने कोशिश गरे । तर मधुसूदन मानेन र ऊ संगीतालाई लिएर त्यहाँबाट हिँड्यो।
दुवैजना गोरुगाडा चढेर घर फर्किंदैथिए । अचानक बाटैमा गाडीको पांग्रो खुस्कियो । त्यसपछि उनीहरू पैदलै हिँडे। एक ठाउँमा पुगेपछि संगीतालाई तिर्खा लाग्यो । मधुसूदनले उनलाई रुखमुनि राखेर पानी खोज्न गयो।
मधुसूदनले गल्ती मान्यो। उसले भगवान् बुधदेवसँग क्षमाप्रार्थना ग–यो र भविष्यमा कहिल्यै पनि यसो नगर्ने प्रण ग–यो। मधुसूदनको प्रार्थना सुनेर बुधदेवले उसलाई माफी दिनुभयो। त्यतिखेरै अर्को व्यक्ति गायब भयो।
अरू मानिस पनि यो चमत्कार देखेर छक्क परे। उक्त व्यक्ति बुधदेव आफैं हुनुहुन्थ्यो। भारतीय वेबसाइटबाट